चिनियाँ राजदूतको दौडधूप किन ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार चिनियाँ राजदूतको दौडधूप किन ?
२०७७, २० बैशाख शनिबार ०८:४१
सत्तारुढ दल नेकपामा संकट गहिरिँदै गएको समयमा चीनका राजदूत होउ यान्छीले मतान्तर देखिएका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेकी छन्। चिनियाँ राजदूतले बिहीबार नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी चीनको चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई मिलाउन चिनियाँको भूमिका र सद्भाव रहेको चर्चा भइरहेका बेला अहिले दलको विवादमा पनि चीन सक्रिय देखिएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले राजनीतिक अवस्था कमजोर भएपछि छिमेकी दौडधूपमा हुने हाम्रो पुरानै नियति रहेको बताए। यसमा पहिला अर्को छिमेकी (भारत), अहिले अर्को (चीन) सक्रिय छ। ‘यहाँ अर्थ विभिन्न लाउलान् तर म यति भन्छु, यो समयमा चिनियाँ राजदूत होउ तपार्इं आरामै हुनुहुन्छ भनेर सोधपुछ वा औपचारिकताका लागि मात्र गएकी होइनन् होला’, आचार्यले भने।
चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाउने क्रममा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि भएको थियो। यसमा चीनले खुला रूपमा नभने पनि भित्र चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। संयोग नै होला उनले भेटघाट गरिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ। यसलाई पनि अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ।
‘एमसीसीको विषयमा ध्यान दिने गरेका होलान् त्यसको मेरिट– डिमेरिट त हरेक मुलुकले नियाल्छ नि ? ’ पूर्वप्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहिसकेका कूटनीतिक जानकार मिलन तुलाधरले पनि यो भेटघाट कोरानासँग सम्बन्धित नै रहेको हुनुपर्ने बताए।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले कूटनीतिमा स्तर, समय, सन्दर्भ, पृष्ठभूभि र उपयोग गरेको शब्दले अर्थ राख्ने बताए। भने, ‘चिनियाँ राजदूतको भेटघाट नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिको टेलिफोन वार्तापछि भएको छ। अनि भेटघाटको क्रममा एमसीसीको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ। दलभित्र प्रधानमन्त्रीलाई असजिलो पारेर पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको छ।’
चीनबाट ३ सय ४१ टन औषधि ल्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपाली सेनाले गरिसकेको छ। चीनले कतिपय औषधि सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराउने भनिरहेको अवस्थामा नेपालले खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। चीनका केही च्यारेटी संस्था र उद्योगका सहयोग आइरहेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
Previous articleएमसीसीबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको फरक मत
Next articleपर्यटन उकास्न सहकार्यको तयारी